नेपाल आउने पानीजहाज कता बाट आउँनेछ ? « LiveMandu
नेपाल आउने पानीजहाज कता बाट आउँनेछ ?
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०७:००
एउटा भुपरिवेष्ठित देशलाई जलमार्गबाट जोड्नु सहज कुरा त हैन र असहजता त्यतीबेला बढेर जान्छ जब नेपालजस्तो तहतहको भूभाग मिलेर बनेंको हुन्छ । हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समान छैन र यसरी असमान क्षेत्रमा पानीजहाज ल्याउनु निकै कठिन त पक्का हुन्छ । तथापि नेपालमा भएका ठूला ठूला खोलानालाहरु का कारणले तिनै जलसतहमा पानीजहाजलाई नेपाली भूभागमा उतार्ने महत्वाकांक्षा प्रयोगात्मक रुपमा उति असंभव पनि नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले पानी जहाज कार्यालय नै खोलिसकेको र भविष्यमा सार्वजनिक लगानीको उत्साह अवसर पनि घोषणा गरेको छ ।
भारतको हाजीपुरमा गण्डकी नदि नेपालबाट गएर गंगामा मिल्दछ भनें कुर्सेलामा कोशी गैगा प्रवाहमा समावेश हुन्छ । नेपालमा जलमार्गको संभावना यिनै संगमस्थलमध्य एउटा मार्फत मात्र संभव छ । चितवन नवलपरासीको त्रिवेणीघाट र हाजीपुरबिचको दुरि करिब ३०० किमी छ । भारतीय पक्षले पनि आफ्नो जलमार्ग बढोत्तरीमा यस क्षेत्रलाई प्रार्थमिक्ताका साथ राखेको छ र गत माघ २८ को हिन्दुस्तान टाइम्समा भारतीय सरकारले १२ दशमलव ९१ करोड भारतीय रकम विनियोजन गरेको पनि उल्लेख थियो । भारतका केन्द्रिय सडक परवाहन र राजमार्ग मन्त्री नितिन गड्कारीले त यस मार्गको औपचारीक शिलान्यास नै गरेको जानकारी भारतीय मिडियाहरुले केहि महिनाअघि नै दिएका हुन् । यस अवस्थामा नेपाल भारत जलमार्गको दुबैपक्षबाट जुझारु रुपमा कार्य भए संभावना प्रशस्त देखिन्छ ।
उक्त जलमार्गको नेपाली गन्तब्य भनें नवलपरासीको भैंसालोटन व्यारेजमा हुने प्रावधान गरिएको छ । प्राविधिक रुपमा नदिमा जहाज चलाउन कम्तिमा नदिको गहिराई १ दशमलव ५ फिट हुनुपर्ने हुन्छ र नदिको गहिराई नपुगेमा नदिलाई खनेर गहिरो बनाउनुपर्ने हुन्छ । पानीजहाजलाई पारवहन सामाग्रीको अनुरुप वर्गिकरण गर्दै लिक्वीड, डाई र पेसेन्जर भेसल भनिन्छ र तौल क्षमता अनुसार पानीजहाज चल्ने जलसतहको ठम्याई गरिन्छ ।
ढुवानीका लागि जलमार्ग हवाईमार्ग र स्थलमार्ग भन्दा निकै किफायती रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाँउदछ । नेपालमा अधिकतम २० टनका कन्टेनरहरु भारतबाट आँउदछन् र जलमार्ग सुचारु भएमा हजार टनको जहाज चलाउन मात्र सकेमा पनि एउटै भेसलले ५० कन्टेनर बराबर सामान ल्याउने देखिन्छ । स्थलमार्गबाट एक लिटर इन्धनले २४ टन भार तान्न सकिन्छ भनें जलमार्गमा त्यतिकै इन्धनले १०५ टन कार्गो तान्न सकिन्छ ।
जलमार्ग वातावरणमैत्री हुने र इन्धन प्रभावकारितामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने तथ्याकं देखिन्छ । यसैवर्ष पौष ३० मा नेपाली मन्त्रीपरिषदले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरि प्रधानमन्त्री ओलीले फाल्गुन २ मा कार्यलयको उदघाटन नै गर्नुभएको हो ।
यो नेपालको पानीजहाज महत्वाकांक्षा साकार हुन समय र श्रोतको निकै लागत रहने प्रष्ट छ । मुख्यतया नदिको सतह खन्न र खोलालाई चौडा बनाँउदै पानीजहाजमैत्री बनाउन खर्च लाग्ने बताइन्छ । यसका अलावा बन्दोवस्ती अनि संरचनाका लागतहरु पनि उत्तिकै लाग्ने बताइन्छ । नेपाली जलमार्गको सपनामा भारतसंगको निर्भरता १०० प्रतिशत रहन्छ किनभनें यो जलमार्ग पूर्णत भारतीय भूभागबाट नेपाल प्रवेश गर्नेछ ।